‘विप्लव’को बन्द, कहाँ के भयो ? - Sagarmatha TV
‘विप्लव’को बन्द, कहाँ के भयो ?
काठमाडाै । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेका बन्दका कारण काठमाडौं उपत्यकामा खासै असर नपरे पनि उपत्यका बाहिर भने जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
बन्दका कारण यातायात ठप्प हुँदा आफ्नो गन्तव्यमा जाने यात्रु समस्यामा परेका छन् । सरकारले राष्ट्रघात र जनताको स्वाभिमानमाथि कुठराघात गरेको भन्दै नेकपाले बन्द आह्वान गरेको हो ।
यसैबीच, झापाको मेचीनगर गाउँपालिकास्थित सुर्योदय यातायात प्रालिको ग्यारेजमा आज बिहान ३ बजे सकेट बम विष्फोट भएको छ । बम विस्फोटबाट पार्किङमा राखिएका मे १ ख २७३३ र मे १ ख २७२६ नंम्बरको बसमा क्षति पुगेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले सकेट बम विष्पोट गराएको हुनसक्ने झापा जिल्लाका प्रहरी उपरिक्षक विष्णु केसिले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, धनकुटामा गस्तीमा रहेको प्रहरीको गाडीमाथी ढुंगा प्रहार भएको छ । बन्दका क्रममा सुरक्षा तैनाथीका लागि गस्तीमा रहेको प्रहरीको गाडीमा ढुंगा प्रहार भएको हो । ढुंगा प्रहार गरेको आरोपमा प्रहरीले गुठिटारका ६० बर्षीय ध्यानबहादुर तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यसैबीच, वीरगंजको बसपार्कमा राकिराखेको वीरगंज–ठोरी चल्ने ग १ ख ३१४७ नम्बरको बसमा आगजनी गरिएको छ । आगजनीबाट वस पुर्ण रुपमा क्षति भएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै, धादिङमा दुई वटा भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रकमा आगजनी भएको छ । धादिङको धुनिबेशी ६ चालिसे बजारमा दुई वटा ट्रकमा आज बिहान आगलागी भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । आर जे ४२ जी ए ५०२१ र आर जे ४२ जी ए ०७५६ नम्बर प्लेटको गाडीमा आगजनी भएको हो ।
यसैबीच, चितवनको भरतपुरमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केट अगाडि गराइएको बम विस्फोटबाट सुपरमार्केटका सिसाहरु फुटेक छन् । त्यस्तै आइतबार बिहान चितवनको लोथरमा पनि वम विस्फोट भएको जनाइएको छ ।
यस्तै, मकवानपुरको हेटौंडा–४ कर्रामा भेटिएको शंकास्पद बस्तु नेपाली सेनाले बम डिस्पोजल टोलीले निस्क्रिय पारेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गुड्ने सवारीलाई त्रसित गर्ने उद्देश्यले राखेको शंकास्पद बस्तुसहितको प्रेसर कुकर नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेको हो ।
एमाले–माओवादी पार्टी एकता घोषणा आज
एमालेको निर्णयः एकतापछि स्थायी समिति ४३ र केन्द्रीय समिति ४४१ जना
निजी क्षेत्रको विकासका लागी आवश्यक वातावरण वनाउने मुख्यमन्त्रीहरुको प्रतिवद्धता
मकालु एयरको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको शव काठमाडौं ल्याईयो
यसरी भयो मकालु एयरको जहाज दुर्घटना (फोटोफिचर)
चीनिया पूर्ववरिष्ठ नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जन्मकैदको फैसला
मङ्लबार, बैशाख २५, २०७५ 0
इजराइलमा जापानी प्रधानमन्त्रीलाई ‘जुत्ता’मा खाना दिइएपछि हंगामा
मङ्लबार, बैशाख २५, २०७५ 41
ट्रम्पमाथि अाखिर किन खनियो फ्रान्स ?
आइतवार, बैशाख २३, २०७५ 0
रुसमा राष्ट्रपति पुटिनविरुद्ध प्रदर्शन
अमेरिकी राज्य हवाइमा ज्वालामुखि बिस्फोट सगैँ ५ रेक्टर स्केलको भुकम्प, हजारौ प्रभावित्
शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ 0